Imbali yeNkampani ye-CM Mask-Jiande Chaomei Daily Chemicals Co., Ltd.
U-Lin Jinxiang, umseki ka-Chaomei-inkokheli yasekhaya kwicandelo lokhuseleko lokuphefumla
Usekela-Mongameli wase-China uMbutho woShishino lweMpahla eyolukiweyo, uMongameli we-Zhejiang yoKhuseleko kunye noKhuseleko lwezeMpilo kwiMveliso yoShishino, uSihlalo we-Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd.
I-Jiande Chaomei yemihla ngemihla ikhemikhali Co., Ltd. "ngumqondiso wegolide" owaziwayo kwicandelo lokhuseleko lokuphefumla kushishino lweinshurensi yezabasebenzi. Emva kweminyaka engaphezulu kwama-40 yokusebenza nzima, phantsi kobunkokheli bukaSihlalo uLin Jinxiang, uChaomei ubekwe kwindawo ephambili kwiimveliso ezifanayo ngokwesikali seshishini, isabelo sentengiso kunye nefuthe lophawu, kwaye wabandakanywa kwibhetshi yesithathu ye- "Made in Zhejiang" iyunithi zokuyila ezisemgangathweni, "PM2.5 zoKhuselo zoKhuselo" iyunithi yokwenziwa komgangatho weqela, kunye neyunithi yoyilo yomgangatho kazwelonke wokuthintela ukuphefumla kwemeko. I-North Korea ayifumananga kuphela iphepha-mvume lokuvelisa imveliso, kodwa ikwafumana nelayisensi yezonyango kunye nezempilo. Ngenye yeenkampani ezimbalwa zasekhaya ezinokuvelisa iimaski zokukhusela impilo, ezomkhosi, kunye nezonyango.
Endleleni, u-Lin Jinxiang uziva ukuba inde indlela ekusafuneka ihanjwe, kwaye akanobuganga bokuyekethisa nakancinci, ekhokelela kwishishini ukuba liphakame ngenkalipho kulwandle loqoqosho kwaye luhlaziye. Kutshanje, umhleli we-China Labour Insurance Network uqhube udliwanondlebe olukhethekileyo kunye noSihlalo uLin Jinxiang.
Unokubuthwala ubulolo, unokubamba amaphupha
Iimpawu ezi-pragmatic zikaLin Jinxiang zivela kumava akhe adlulileyo. Ukujonga emva kwi-1978, umfama oselula waqala ishishini lakhe ngokuthengisa imoto yeenkuni malunga ne-30 yuan kunye nokuboleka i-20 yuan. Kwiminyaka eli-10, wayengumphathi kunye nomthengisi, ethengisa ii-mops, iigloves ezinithiweyo, kunye nezixhobo zokufunda izixhobo. Ukugcina imali ekuqaleni kweshishini, uLin Jinxiang uthathe iikeyiki zerayisi ezenziwe ngunina ngalo lonke ixesha ephuma eyokugcwalisa indlala yakhe. Olona nyango luphambili ebusuku yayiyihotele ye-yuan ezintlanu ngobusuku, kwaye wayeza kuchitha ubusuku kwiindawo ezikhuselekileyo. Uninzi lweendawo zokuhanjiswa ziintaba, zinamaqhuqhuva kwaye ziyingozi. U-Lin Jinxiang wayengazi ukuba ubile kangakanani kubila kuhambo olude. Ngamazwi akhe, akukho nto kulula ukuyenza emhlabeni. Ukuba ufuna ukunxiba isithsaba, kufuneka uqale uthwale ubunzima.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 ubudala ubudala ukuba nobuganga bokusebenza nzima. U-Lin Jinxiang uthe: "Ndilahlekile xa ndihlangabezana neengxaki, kodwa andizange ndicinge ukunikezela. Ngoku ndinebhongo ngokumisela iqonga lokulinganisa lomgangatho wabantwana abaneminyaka yokusebenza nzima. Ndicinga ukuba wonke usomashishini ulangazelela Oko bendizama kungadlula, kwaye ngoku ndiyababona oonyana bam ababini besebenza nzima besenzela uhlobo olungcono lwaseKorea naseMelika. Ndonwabile.
Ethetha ngobunzima bexesha elidlulileyo, uLin Jinxiang wayengenamvakalelo ingako, “Ngapha koko, isizukulwana sethu sinethamsanqa. Emva kohlengahlengiso kunye nokuvulwa, umgaqo-nkqubo wesizwe ukhuthaza ishishini, ke ndinethuba lokwenza into endiyifunayo. Ukuba umntu ufuna ukuphumelela, Okokuqala, kufuneka sifunde ukunyamezela ubunzima, ukunyamezela isizungu, nokubambelela emaphupheni.
Ukufezekisa uxanduva kwezentlalo kwaye uthethe nge-inshurensi yomsebenzi
Ngo-1996, uLin Jinxiang waqala ukuseta umzi-mveliso ukuze avelise iimaski phantsi kokungeniswa komhlobo, kodwa ekuqaleni, uluhlu lweempahla lwalugcwele ngenxa yokuthengisa kakubi. Ukubona ukuba le nkampani inengxaki yemali, usapho lwayo lwasebenzisa yonke imali ebebeyigcinile ukumxhasa. Oko kukuthi, ukusukela ngala mzuzu ukuya phambili, uLin Jinxiang akazange ashukunyiswe ngaphandle kobunzima obukhulu ekuhlangatyezwane nabo: Ukwenza imveliso elungileyo kunye nenkampani elungileyo yeyona nto ibuyayo kusapho lwakhe.
"Ekuqaleni, bendicinga ukuba ukwenza ishishini leinshurensi yezabasebenzi kunokuxhasa usapho, kodwa ngokwenza oko, ndathandana neli shishini lilungileyo kwaye lilungile. Ngokwentetho ethandwayo ngoku, ibizwa ngokuba ungayilibali injongo yoqobo. Ukucinga ngako ngoku, ukuphambuka ngamanye amaxesha kuyinto elungileyo. Ngenxa yakho Ukuthanda, ezinye iingcinga ziya kuhlala zisengqondweni yakho. Andazi ukuba loluphi uhlobo lweziqhamo oluza kuthwala ... "uLin Jinxiang uthanda ukuphanda kuphando kwaye uneembono ezizodwa zokuthengisa. Uye wazinikezela kwikhondo lomsebenzi. Kwaye "ukuthanda" kuye kwamenza, kwaye kwenziwe neKorea neMelika namhlanje.
I-SARS yahlasela ngo-2003, kwaye iingxelo ze- "Severe Respiratory Dysfunction (SARS)" zavela kwiindawo ezininzi zehlabathi. I-Indonesia, iPhilippines, iSingapore, iThailand, iVietnam, iUnited States, iKhanada namanye amazwe ngokulandelelana ziye zabona iimeko ezininzi ze-SARS. Ngo-2004, iSebe lezoNyango lwezoNyango kwiKhomishini yoPhuculo yeSizwe kunye noHlengahlengiso ligqibe kwelokuba iNorth Korea kunye ne-United States kufanele ukuba ibeyinqanaba lokuqala lamashishini agcina uncedo kwilizwe likaxakeka (iNorth Korea kunye ne-United States bezingxamisekileyo kuzwelonke. iyunithi yokugcina izinto iminyaka eyi-14 ilandelelana). Kude kube namhla, i-North Korea kunye ne-United States zisenoxanduva lokubonelela ilizwe. Umsebenzi obalulekileyo woncedo olungxamisekileyo. U-Lin Jinxiang usayikhumbula ngokucacileyo imeko yeemaski ezingama-200,000 ezazithuthwa zasiwa kwisibhedlele iBeijing Xiaotangshan ngenqwelomoya ekhethekileyo. Ukubona imeko yenkomfa yoonondaba, ubunkokeli obuphambili kunye nabo bonke abasebenzi abanxibe iimaski zaseNyakatho Korea naseMelika, uLin Jinxiang waziva okokuqala ngqa umsebenzi obekekileyo womntu weinshurensi yezabasebenzi.
Ngexesha le-SARS, i-North Korea kunye ne-United States zanyanzelisa ukuba zinganyusi ipenny kwaye bazimisele ukuhambisa iimaski kwiindawo ezazifuneka kakhulu kuzo. Oku kuphumelele indumiso koogxa bakhe kolu shishino kwaye kwasekwa isikhundla esiphambili seNyakatho Korea kunye ne-United States kwicandelo leinshurensi yezabasebenzi.
Emva kwe-SARS, i-North Korea kunye ne-United States baqwalasele ngakumbi ukufezekisa uxanduva lwentlalo: nokuba yayiyinyikima yase-Wenchuan, uqhushumbo e-Tianjin Port, okanye ukuqhambuka komkhuhlane weentaka, i-North Korea ne-United States ngaphandle kwamathandabuzo zinike ukhuseleko lokuphefumla mahala. iimveliso kwiindawo zentlekele ngexesha lokuqala. Kwangelo xesha, ubuhle beMntla Korea bayasebenza nakwimicimbi yezentlalo enjengelizwi elimnandi leSixeko saseJiande, isidlo sangokuhlwa sabantu abadala kuMthendeleko weSibini weThoba, inkxaso-mali yeSky Breeze Action yeZiko leZococeko leSixeko saseJiande, inkxaso-mali yabafundi abasekholejini abasweleyo, nentsebenziswano norhulumente wengingqi ukwakha iipaki zabantu belali. .
Ukuphucula ixabiso lebrendi ngokusebenzisa ubuchwepheshe obutsha
"Ukuba awukwazi ukuthatha ithuba lamaza, ekugqibeleni uyakususwa lixesha elitsha," utshilo uLin Jinxiang.
Kwiminyaka yakutshanje, ngombane wedatha enkulu, ubukrelekrele bokufakelwa, kunye ne-Intanethi, iNorth Korea kunye ne-United States baphendule ngenkuthalo kwisimemo selizwe sokuphuculwa komgangatho, ukuqiniswa kwenguqu kwezobuchwephesha, ukwanda kweenkonzo zemveliso, kunye neendlela ezandisiweyo zokuthengisa. Namhlanje, uChaomei unamaziko ovavanyo lodidi lokuqala, amaziko eR & D kunye namaziko e-e-commerce ekhaya nakumazwe aphesheya. Inkampani ikhula kwaye ivelise iimodeli ezingaphezu kwe-100 kunye nokubalulwa kuthotho lokhuselo lokuphefumla kunye nokuhlamba imichiza imihla ngemihla, kwaye ifumene izinto ezi-4 zokuvelisa kunye neepatent zemodeli eziluncedo ezingama-35. Ixabiso lemveliso lonyaka lenyuke ukusuka kwi-3 yezigidi ze-yuan ngo-2000 ukuya kwi-yuan engaphezu kwezigidi ezingama-200.
I-North Korea kunye ne-United States ye-Intanethi yoLawulo lweZinto
Ngokuka-Lin Jinxiang, inkampani esandula ukuthunyelwa kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yolawulo lwe-IoT iya kuqhubeka ukunceda iNyakatho Korea kunye ne-United States ukuphucula ukusebenza kwemveliso, ukuzinzisa umgangatho wemveliso, kunye nokukhokela ekufezekiseni ulawulo kunye nokubona ukusuka ekuthengweni kwezinto ezingekho mthethweni, imveliso ukuya kwintengiso. "I-China lilizwe elikhulu lemveliso, kodwa kule minyaka idlulileyo, zombini iimeko zasekhaya nezasekhaya zibeke iimfuno eziphezulu kumzi-mveliso wokuvelisa. Ngokunyamalala kwezahlulo zedemokhrasi kunye neendleko zeendleko, imodeli yokukhula kwesiko lemveliso ayizinzanga. Thina kufuneka sixhomekeke kwitekhnoloji ye-Innovate ukusombulula iingxaki kunye nokwenza ngcono ukhuphiswano lwethu. "
Xa kufikwa kwilifa lokudibana, uLin Jinxiang uneengcinga zakhe, "Ilifa asikokushiya nje ishishini kubantwana ukuba balilawule, kodwa njengomphathi onamava ukucebisa ngezigqibo zabo ezibalulekileyo kwaye benze utshintsho lweshishini kakuhle. Yiyekele kwisizukulwana esitsha. Iinkampani ezikumgangatho ofanayo zingenza okungakumbi kunokubakho nje ngalo lonke ixesha. "
Njengokuba enethemba, ukongezwa "kwesizukulwana sesibini" kuye kwavumela ukuphuhliswa kunye nelifa lomoya waseKorea-waseMelika, kwaye kongeza umfutho omtsha kwishishini. Unyana omkhulu kaLin Jinxiang, uLin Yanwei, ngoku ngummeli weNkomfa yaBantu bakaMasipala waseHangzhou kunye nosekela sihlalo weJiande City Federation of Industry and Commerce. Ukhuthazwe nguZhejiang loKhuseleko kunye noKhuseleko lwezeMpilo kwiMveliso yoMbutho njengoMphathi oBalaseleyo wePhondo laseZhejiang kwaye unoxanduva lokuthengisa imveliso kwinkampani. Unyana wesibini, uLin Yanfeng, ungunobhala wecandelo leshishini, ilungu lePhondo lase-Zhejiang iqela le-inshurensi yezabasebenzi, kunye nenkokeli yezobuchwephesha. Unoxanduva ikakhulu kwimveliso. Uninzi lophando kunye nophuhliso kunye nokuphuculwa kwemigca yemveliso ezimeleyo yaseNyakatho Korea ivela ezandleni zakhe.
U-Lin Jinxiang wathi emva kobomi be inshurensi yezabasebenzi, wenza nezihlobo ezininzi. I-inshurensi yezabasebenzi lishishini elihle kakhulu. Ukongeza ekufumaneni imali, kukwakhusela impilo kunye nokukhuseleka kwabanye; lishishini elinoxanduva. Ukuveliswa kweemveliso zeinshurensi yomsebenzi kufuneka kugqibelele ngakumbi kwaye kuhambelane nomgangatho. Iimvakalelo zalo mntu weinshurensi yomsebenzi zibonakaliswe ngokucacileyo kuye. Ukuze usebenze ngcono kushishino kwaye ukhuthaze ngokupheleleyo inkqubela phambili yeshishini, u-Lin Jinxiang wakhonza njengelinye isekela likamongameli wecandelo lemveliso yeinshurensi yezabasebenzi kwi China Textile Business Association kunye nosihlalo we Zhejiang Safety and Health Protection Products Products Association, ukwenza umzekelo kunye nokusebenzela ishishini leinshurensi yezabasebenzi ngentliziyo iphela.
"Ungalibali injongo yoqobo, qhubeka, kwaye uhlale ulandela ipati." I-Lin Jinxiang ikhuthaza inguqu kunye nophuhliso lwenkampani ekwakhiweni kweqela elikumgangatho ophezulu; iyaqonda "Yenziwe eZhejiang" ngophuhliso lwamashishini akumgangatho ophezulu; Ukutsiba ukuya kwinqanaba eliphezulu lokuvelisa kunye nokukhuthaza "ubulumko eMelika". Ukukhawulezisa ubuchule obuzimeleyo kunye nokwenza ngcono inkqubo esele ikho, iNyakatho Korea kunye ne-United States baqhubela phambili kuhambo olutsha lokwakha uphawu lwe-inshurensi yezabasebenzi kazwelonke, bebonisa uxanduva lwabo olukhulu, kwaye banegalelo ngakumbi kwimpilo yabasebenzi baseTshayina!